चार वर्षपछि कालाजार देखियो, सचेत रहन चिकित्सकको सुझाव - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ लुम्बिनी प्रदेश ∕ चार वर्षपछि कालाजार देखियो, सचेत रहन चिकित्सकको सुझाव
चार वर्षपछि कालाजार देखियो, सचेत रहन चिकित्सकको सुझाव
डी. आर. बन्जाडे सोमबार, २०७६ भदौ २३ गते, ११:१५ मा प्रकाशित
बुटवल—केही दिनअघि पाल्पाको रैनादेवी छहरा गाउँपालिका बल्ढेगंगढीका जीवन रानालाई अत्याधिक ज्वरो आयो । उनी थला पर्न थाले । उनको भैरहवास्थित मेडिकल कलेजमा उपचारको क्रममा कालाजार भएको पत्ता लाग्यो । उनलाई थप उपचारका लागि प्रादेशिक अस्पताल बुटवल पठाइयो ।
अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेट डा. कृष्ण खनालका अनुसार उनलाई हाल अस्पताल कै आइसीयुमा राखेर उपचार भैरहेको छ । तराईमा मात्रै देखिने कालाजार पछिल्लो समय पहाडी क्षेत्रमा समेत देखिन थालेको छ । जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय प्रदुषणको प्रभाव मानिसको हेलचेक्राईजस्ता कारणले पहाडको पनि उच्च क्षेत्रमा कालाजार देखिन थालेको हो ।
भुसुनाको टोकाइबाट लाग्ने यो संक्रमण पहाडी क्षेत्रमा देखिनु स्वास्थ्यका दृष्टिले गम्भीर भएको चिकित्सकहरु बताउँछन् । रुपन्देहीमा चार वर्षअघि मात्र कालाजारका बिरामी भेटिएका थिए । लामो समयपछि बिरामी भेटिनु र उच्च पहाडी क्षेत्रमा कालाजारको संक्रमण हुनु गम्भीर विषय भएको चिकित्सकहरुको बुझाइ छ ।
कालाजार के हो ?
कालाजार ‘लेसमानिया डोनोभानी’ नामक प्यारासाइट प्रोटोजोवाका कारण हुने रोग हो । यो एक प्रकारको सेन्टलाई नामक भुसुनाको काइबाट सर्छ । रोगी व्यक्तिलाई टोकेको भुसुनाले निरोगी व्यक्तिलाई टोकेमा यो रोग सर्छ । त्यसैले यसलाई सरुवा रोग पनि भनिन्छ । कालाजारका दुई प्रकारका हुने डा. खनाल बताउँछन् । उनका अनुसार पहिलो एन्थ्रोपोनोटिक कालाजार भनिन्छ । यो संक्रमित मानिसबाट भेक्टर हुँदै स्वस्थ व्यक्तिसम्म सर्ने अवस्था हो । दोस्रो जुनोटिक कालाजार हो ।
के हुन्छ कालाजार लागेमा
यो रोग लागेमा सामन्यता लगातार ज्वरो आउने हुन्छ । संक्रमितको फियो र कलेजोमा संक्रमण बढ्न गई पेट फुल्ने समेत हुन सक्ने डा. खनालले बताए । त्यस्तै संक्रमितलाई कमजोरी महसुस हुनेलगायत लक्षण देखिने गर्दछन् । यसबाहेक रक्तअल्पत्ता हुने, मानिस दुब्लाउँदैं जाने, फियो धेरै बढ्ने तथा केही समयपछि कलेजो समेत बढ्ने हुन्छ ।
कालाजार प्राण घातक संक्रमण पनि हो । यो सरुवा पनि हुने हुँदा सावधानी अपनाउनुपर्नेमा चिकित्सकहरुले जोड दिन्छन् । कालाजार कुकुर, सुँगुर, हाँस, बंगुर र जंगली मुसाहरूमा यो रोग बढी पाइन्छ । कालाजार जुनसुकै उमेरको व्यक्तिलाई हुन सक्ने भएकाले सचेत रहनुपर्छ । कालाजारबाट बच्ने तत्कालीन उपायका रुपमा कीटनाशक औषधि छर्केर भुसुना मार्ने नै हुने चिकित्सकहरुको सुझाव छ ।
त्यसका अलावा अतिरिक्त सुत्दा झुलको प्रयोग गर्ने, साँझपख घरबाहिर बस्दा जिउ ढाकिएको कपडा लगाउने तथा घर वरीपरिको पानी जमेको खाल्डाखुल्डी पुर्ने तथा ड्रम, टायरहरु सुख्खा राख्नु पर्ने डा. खनाल बताउँछन् । घर वरिपरी सरसफाईमा समेत ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।